Knowledge – Latest News
ဟန်နေတာကတော့ လတ်တလောမှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က ပရိသတ်တွေကြား စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို ရရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ Eternal Gosh Band ရဲ့ အဓိက အဆိုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လ ၃၁ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ FGLiveLounge ပွဲမှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို ဖေစ့်ဘုတ်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တဲ့နောက် ပရိသတ်တွေကြား အရင်ကထက် လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ […]
ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အနုပညာရှင် နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ ဟိန်းမင်းသူက အနုပညာလျှောက်လမ်းကိုယ်စီမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ကိုယ်စီရရှိနေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကလည်း သရုပ်ဆောင်လောကမှာ ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိထားသလို ဟိန်းမင်းသူကလည်း မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးခြင်းကို ခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ ဟိန်းမင်းသူက ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ […]
ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားမှာ အဆင်မပြေမှု၊ သံသယတွေနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေဆိုတာ အမြဲမပြတ် ရှိနေတဲ့အရာတွေ၊ ဘယ်တော့မှလည်း ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်တဲ့ အရာတွေပါ။ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာလို့ အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာရင် အငြင်းပွားမှုကနေ အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်မသွားဖို့၊ အသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေကနေ ပြဿနာကြီးဖြစ်မသွားဖို့ နှစ်ယောက်လုံးက ဒီအချက်လေးတွေကို မလုပ်မိအောင် ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ (၁) မအော်ပါနဲ့ တစ်ခုခုအတွက် အငြင်းပွားကြပြီဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က […]
#ဇန်နဝါရီ ဇန်နဝါရီ လမှာ မွေးဖွားသူတွေကတော့ ထူးထူးခြားခြား တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ သူတို့ရဲ့မွေးနေ့ဟာ ၁ လပိုင်းအတွင်း ကျရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လမ်းလျှောက်ရင် ဘယ်တစ်လှမ်း၊ ညာတစ်လှမ်း လျှောက်ကြသူများ ဖြစ်ကြပြီး ရေများများသောက်ရင် သေးများများပေါက်တတ်တာကိုတော့ သတိထားသင့်ပါတယ် …။ #ဖေဖော်ဝါရီ ဖေဖော်ဝါရီ လမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ […]
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိမက်ဒ်ယာပရာဒေရ်ှပြည်နယ်သည်မိုးခေါင်သဖြင့်ဖားနှစ်ကောင်ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်လကပေးစားခဲ့ပြီးယခုအခါရေကြီးနေသောကြောင့်ထိုဖားနှစ်ကောင်ကိုကွာရှင်းပေးလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ဟိန္ဒူမိုးနတ်မင်းကျေနပ်စေရန်အလိုငှာဒေသခံဘာသာရေးအဖွဲ့တစ်ခုကဖားအထီးနှင့်အမကိုဇူလိုင်လ၁၉ရက်ကလက်ထပ်ပွဲလုပ်ပေးပြီးထိမ်းမြားပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းယခုအခါရေကြီးနေသောကြောင့်ထိုနှစ်ကောင်ကိုကွာရှင်းပေးလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ထိုဒေသတွင်မိုးအလွန်ကြီးနေပြီး၁၃နှစ်အတွင်းမိုးရေချိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေသည့်အတွက်ဒေသခံများကမိုးရပ်သွားရန်လိုလားနေကျပါသည်။ထိုကြောင့်ဒေသခံများကမိုးဒဏ်သက်သာရန်အလိုငှာဘာသာရေးအဖွဲ့ကဖားနှစ်ကောင်ကိုကွာရှင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖားနှစ်ကောင်၏ကွာရှင်းပွဲကိုဘုရားကျောင်းတစ်ခုတွင်အခမ်းအနားဖြင့်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သို့သော်မိုးရေချိန်လျော့သွားခြင်းမရှိပဲုလာမည့်လေးရက်အထိဆက်ကောင်းနေမည်ဟုမိုးလေဝသအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဖားနှစ်ကောင်ကိုပေးစားလိုက်၊ကွာရှင်းလိုက်လုပ်နေသည့်သတင်းမှာအင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင်တော်တော်လေးဂရက်ရိုက်လျှက်ရှိပြီးလူစိတ်ဝင်စားမှု့အများဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေပါသည်။ သည့်ကိစ္စကိုသင်တို့လည်းဘယ်လိုမြင်ပါသလဲပရိပ်သတ်ကြီးရေ၊သူ့ဘာသာနေတဲ့ဖားနှစ်ကောင်ကိုအတင်းချစ်ခိုင်းပြီးမှအဝေးကိုခွဲခွာလိုက်ခြင်းကတော့ စာရေးသူသာဖားကလေးနေရာမှာဆိုလျှင်”ချစ်ခြင်းကိုမခွဲပါနဲ့ ချစ်ခြင်းကိုမခွဲပါနဲ့”ဆိုပြီးအော်ငိုနေမိမှာအမှန်ပါပဲနော်။ crd….
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ မိုးအောင်ရင်ကတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြန်လည်ပြုလုပ်နေပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးအောင်ရင်ကတော့ လတ်တလောမှာလည်း “အောက်စီဂျင်”ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးအောင်ရင်ကတော့ သူနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို အတူတူဝင်ရောက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့အတူ တွဲဖက်ပြီး သရုပ်ေ်ဆာင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာတော့ မိုးအောင်ရင်၊မြင့်မြတ်တို့နဲ့အတူ ရွှေမှုံရတီတို့လည်း […]
ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ(၁၇)ရက်နေ့ကတော့ မော်ဒယ် မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ရဲ့ မွေးနေ့ လေးပါ။ ပိုင်တံ ခွန် ကတော့ စက်တင်ဘာ (၁၇)ရက်နေ့က တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်းမြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ဒီနှစ်ကတော့ အသက် (၂၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးပါ။ ပိုင်တံခွန် ကတော့ အနုပညာလောကထဲကို runway မော်ဒယ် အဖြစ် […]
စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာမှုအရဆိုရင်တော့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ချစ်သူတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး စိတ်ထားနူးညံ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ ချစ်သူရွေးချယ်ပြီး date လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်သူလေးတွေနဲ့ ဘာကြောင့် date လုပ်သင့်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ (၁) စိတ်ရှည်ကြတယ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ အပေါ်မှာတောင် ဘာမဆို စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ချစ်တတ်တာကြောင့် ကိုယ့်ကောင်မလေးအပေါ်မှာဆိုရင်တော့ […]
ဘန်ကောက်ကို ခရီးထွက်ရင်း ဆော့ကစားပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ ခေတ်လေးနဲ့ သစ်လေးတို့ရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်တွေ
အဖေဖြစ်သူ အဆိုတော်ကြီး လင်းလင်းနဲ့ မေမေ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ချစ်သုဝေတို့ထက်ကို အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်သတ်တွေပိုများတဲ့ မေမြန်မာခေတ်နဲ့ မေမြန်မာသစ်တို့ ညီအမနှစ်ဦးကတော့ အရုပ်လေးတွေလို ချစ်စရာကောင်းလွန်းသူလေးတွေပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ခေတ်လေးနဲ့ သစ်လေးက မေမေချစ်သုဝေနဲ့အတူ ဘန်ကောက်မြို့သို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ကစားကွင်းတွေလည်း လျှောက်လည်းရင်း အရမ်းပျော်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်ကို […]
ဝိုင်းစုရဲ့ Birthday Surprise ကြောင့် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အောင်လ။
စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ အဆိုတော်အောင်လရဲ့ မွေးနေ့မှာ ချစ်သူလေး ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက Birthday Surprise တွေလုပ်ရင်း မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့(စက်တင်ဘာလ ၁၇)ရက်နေ့ကတော့ အဆိုတော် အောင်လရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချစ်သူကောင်မလေး ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေ ပြောထားတာ တွေ့ရပါတယ်။‘’Happy birthday Ko. […]